Renault समूह, अब हरेक मानिस थाह छ, जो आफ्नो आगामी नवीनता renault अल्पाइन A110-50 संग सबैलाई अचम्ममा। नयाँ मोडेल राम्रो यसको वर्ग मा मोडेल बीचमा युरोप मा जानिन्छ जो ग्रैंड मोनाको मा प्रिक्स, दिग्गज ब्रान्ड अल्पाइन Berlinette एक 50 वर्ष वार्षिकोत्सव, मा प्रस्तुत गरियो।
Automakers यो शो मात्र होइन दर्शक ग्रान्ड प्रिक्स र प्रेस, तर पनि सबै कार मालिकहरूको लागि चकित गर्न चाहन्छु। यहाँ के असामान्य छ? र आश्चर्य यो कार धेरै contrasting Renault खेल संस्करण द्वारा निर्मित सबै सामान्य देखि बाहिर खडा छ भन्ने छ। को सामान छैन बोक्न र शहरी यातायात मा ड्राइव कसरी ढिलो र बोरिंग थाहा छैन नगर्ने ती को एक नम्बर को यो असामान्य कार। कार एक खेल रूपबाट निलम्बन, शक्तिशाली इन्जिन, खेलकुद शरीर र अत्यधिक महत्वाकांक्षा छ। कार को पछिल्लो मा ड्राइभ, इन्जिन एक केन्द्रीय स्थान छ। यो कार बस एक नीरस शहर कार गर्न प्राप्त भएन देखि, यो प्रयास गर्दैन।
Indicative मोन्टेकार्लो मा सूत्र 1 मा ट्रयाक मा मोडेल जाँच, दर्शकहरु को दर्शक आत्मा कब्जा। चेक Renault साँच्चै खरानी को पौराणिक कथा पुनर्जीवित गर्न निमित्त देखाइएको छ, र automaker अन्त सम्म विजय लागि लडिरहेका गरिनेछ।
फ्रेम डिजाइन नवीनतम नवीन प्रविधिहरू र ईन्जिनियरिङ् समाधान प्रयोग गर्दछ। किनभने यो र मोडेल को अन्य नयाँ तत्व भविष्य को एक कार जस्तो। विकासकर्ता ओटोमोबाइल को सबै अवस्थित मूल्यांकन पहिलो स्थानहरू विजेता मा विश्वास गर्दै छन्। यो कार को डिजाइन गर्न धेरै सामान्य लीक देखि bouncer छ, यो एकदम सन्तुलित र जैविक छ। यो लामो समय र लागि मोडेल गर्न कठिन काम भन्ने कुरा स्पष्ट छ।
डिजाइनर केवल एक खेल स्टिकरमा संग Renault अल्पाइन सिर्जना गर्न, र उहाँलाई योग्य बनाउन चाहन्थे एक जाति कार। स्वाभाविक, कम्पनी Renault नयाँ देखि आर्थिक लाभ उठाउन योजना परियोजना। उपकारको साटो तिरे गरिनेछ को निवेश, अन्य परियोजनाहरू दिन्छ नै लाभ, समय भन्नेछु कि भने।
राम्रो पुरानो, नयाँ Renault मोडेल मा A110 मात्र नीलो रंग छोडेर देखि, आकार, ठूलो पाङ्ग्रा र पछिल्लो बिघ्नकर्ता, लगभग केही छ राउण्ड। कम्पनी बरु पुरानो remake गर्न प्रयास भन्दा, नयाँ कुरा सिर्जना गरेको छ।
, सरल शारीरिक र अनुकूल: यो मोडेल Renault गरेको डिजाइन नीति को तीन आधारभूत सिद्धान्तहरू व्यक्त, को Berlinette जस्तै धेरै गोलाकार एक सानो छ।
A110-50 अघि मध्यवर्ती मोडेल 2010 मा पेरिस मा स्वतः शो मा प्रदर्शन भएको थियो जुन एक समान अवधारणा DeZir थिए। तर, automaker ईन्जिनियरहरु अनुसार, नवीनतम मोडेल सबैभन्दा होनहार परियोजना हो।
ब्रान्डहरु: गलत छनौट गर्न कसरी छैन
क्सीनन दीपक H27 - यो कसरी राख्न?
को रियर स्तम्भहरु प्रतिस्थापन (2110)। समर्थन-खाँबो 2110
माइक्रो-USB केबल। युएसबी कनेक्टरों
बार्स समारा: ठेगाना, विवरण
Pathetic: स्थान, समारोह, हार
कसरी र किन nitroglycerine मलम लागू गरिन्छ
क्यानाडा सुपर मोडेल कोको Rosha: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन र रोचक तथ्य